Naung Yoe Technologies (Security Service) – Hotel Systems, Security Systems, Communication Systems
About Us Naung Yoe Technologies isaleading Security Service, Integration and Equipments provider with strong focus on service, technology, quality and client satisfaction provider in Myanmar. Our solution scope includes custom-made security layout plan and design, network solution, communication...
No.(16), Aung Min Khaung (2nd) Street, Mamaryut Township, Yangon
KLC Computer Center – Computer Training
KLC Computer Center Our Services: > နံနက်(၇)နာရီမှ ည(၉)နာရီအထိ နှစ်သက်သောဘာသာရပ်ကို တစ်ဦးချင်း သင်ကြားပေးသော သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။ > အိမ်လိုက်ပြီး သင်ကြားပေးပါသည်။ > ၀ါရင့်ဘွဲရဆရာ၊ ဆရာမများက စနစ်တကျ သင်ကြားပေးပါသည်။ > ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် စက်တစ်လုံးနူန်းဖြင့် သင်ကြားချိန်နာရီအပြည့် စက်သုံးစွဲနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ > သင်တန်းကာလအတွင်းနှင့် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ စက်အပိုချိန် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါသည်။ > ကလေးငယ်များအတွက် သီးသန့်သင်တန်းလည်း စီစဉ်ထားပါသည်။ > ကျောင်းသားများအတွက် သောကြာနေ့တိုင်း...
No.26/27, Building-1, Hledan, Kamayut Tsp, Yangon
A Collection of High Quality Free Website Templates, Best Free Niche Templates and More For Your Personal or Commercial Purposes. Visit Free Website Templates Now!
45 Street, Botahtaung, Yangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar
Type of IT Services